Liverpool Oo Tuntay Bournemouth - Cakaara News
Liverpool Oo Tuntay Bournemouth
Jigjiga (Cakaaranews) Axad 17ka April 2016 Liverpool ayaa marti u ahayd kooxda Bournemouth, wuxuuna tababare Jurgen Klopp uu kulankan shaxdiisa ku sameeyay 10 isbadal isaga oo nasiyay inta badan xidigihii shaxdiisa ee kulankii ay Reds taariikhda kaga dhigtay Anfield ee Dortmund ee ay Liverpool ugu soo baxday afar dhamaadka Europa Leaque-ga. isagoo labo xiddig oo da’ yar ah siiyay fursadoodii ugu horeysay oo ay ku ciyaaraan Premier League.
Liverpool ayaa bilawday in ay raadiso goolkeeda furitaanka waxayna daqiiqadii 23 aad ay heshay fursado xidhidhiidh ah isaga oo da’yarka Ojo soo abuuray fursado fiican waxa uu marka hore si farsamo badan uu ku soo galay xerada ganaaxa isaga oo laba difaaca soo kala dhantaalay marka hore waxa uu isku dayay in uu goolka toogto laakiin Bournemouth ayaa darbadiisa dabooshay markale Randall ayaa kubbada dib ugu celiyay markale difaaca ayaa iska soo celiyay.
DAQIIQADII 41 aad Liverpool ayaa ugu danbayn jabisay ismari waagii ciyaarta kadib markii uu Roberto Firmino Barbosa uu Reds u keenay goolka furitaanka laakiin waxaa shaqada ugu fiican soo qabtay Jordon Ibe iyo Daniel Sturridge. Sturridge ayaa marka hore cidhib ku dhalin gaadhay goolka laakiin goolhayaha ayaa ka badbaadiyay balse Firmino ayaa sida ugu deg dega badan goolkan u dhamaystiray.Goolkan ayaa ahaa goolkii 9 aad ee uu Firmino xili ciyaaredkan ka dhaliyay Premier Leaque-ga.
DAQIIQADII 40+2 aad Liverpool ayaa heshay goolkeeda labaad waxaana gool aad u qurux badan madax ugu dhaliyay Daniel Sturridge kaas oo ka faa’iideeyay kubbad laaga xorta ahayd oo uu Jordon Ibe si fiican u soo tuuray, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Liverpool hogaanka ciyaarta k udheeraysatay, sidaa ayaana qaybta hore lagu kala nastay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay markale Liverpool ahayd kooxda goolka saddexaad laga filan karayay waxaana daqiiqadii 50 aad Bournemouth birta u garaacay Sturridge kaas oo ku dhawaaday in uu goolkiisa labaad kulankan ka dhaliyo balse birta goolka ayaa ka beenisay.
Daniel Sturridge iyo Adam Lallana ayaa helay laba fursadood oo ay Reds ugu keeni kareen laba gool oo kale balse fursadahan ayaan noqon kuwo laga faa’iideeyay. Intii lagu jiray saddex daqiiqo oo dheeri lahaa Bournemouth ayaa la timid goolka calanka waxaana goolkan udhaliyay Joshua King kaas oo goolkan ku dhaliyay kubbad uu ka helay Andrew Surman, waxayna ciyaartu ku dhamaatay 2:1 ay Reds guul muhiim ah ku soo gaadhay.